▿ (@hensel_17)'s conversations - Wattpad
ႏွစ္​သစ္​မွာ ​ေပ်ာ္​ရႊင္​ၾကပါ​ေစ ..
​forevermore ကို 2020 အမွီ အျပီးသတ္​ခ်င္​​ေပမယ္​့ မ​ေအာင္​ျမင္​ခဲ့ဘူး .. ဆို​ေပမယ့္ ​ဇန္​နဝါရီလကုန္​ထက္​​ေတာ့ ပိုမၾကာႏိုင္​​ေတာ့ဘူးထင္​ပါတယ္​ ..
long time ago .. expected tomorrow .. lovely cherry land .. life & love တန္​းလန္​း​ေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္​​ေန​ေပမယ္​့ ​သည္​းခံ​ေပးပါဦး .. အကုန္​လံုးကို အလွည္​့က်နဲ႔ အဆံုးထိႀကိဳးစား​ေရးသြားပါ့မယ္​ ..
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ..
forevermore ကို 2020 အမှီ အပြီးသတ်ချင်ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး .. ဆိုပေမယ့် ဇန်နဝါရီလကုန်ထက်တော့ ပိုမကြာနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ် ..
long time ago .. expected tomorrow .. lovely cherry land .. life & love တန်းလန်းတွေအများကြီးဖြစ်နေပေမယ့် သည်းခံပေးပါဦး .. အကုန်လုံးကို အလှည့်ကျနဲ့ အဆုံးထိကြိုးစားရေးသွားပါ့မယ် ..
@hensel_17 ခုမွေတြ႕တယ္happy new yearပါ
အာ့ဆိုရင္ေတာ့အသဲကြဲပါၿပီကိုယ္ကက်န္႔ရိသမား အရမ္းႀကိဳက္တဲ့ficေလးေတြပါၿပီေနာက္ပိုင္းရိက်န္႔ႀကီးပဲဆိုေတာ့ တစ္ကယ္ခံစားရတယ္
@pyaesonemg5 ဟုတ္ ..
တကယ္ ထပ္ေရးဖို႔မရွိေတာ့ပါဘူးဗ်ာ .. ဟီးဟီး
@pyaesonemg5 ကိုယ္ အရင္ကေတာ့ ရိက်န႔္ေရာ က်န႔္ရိေရာ ဒလိမ့္ေရာ အကုန္ေရးပါတယ္ .. အခုေနာက္ပိုင္း ရိက်န႔္တစ္ခုတည္းပဲ ေရးပါေတာ့တယ္ ..
ရိက်န႔္ဖစ္ဆိုရင္ ရိက်န႔္ က်န႔္ရိဖစ္ဆိုရင္ က်န႔္ရိ ဒလိမ့္ဖစ္ဆိုရင္ ဒလိမ့္ ေသခ်ာ tag ပါတယ္ .. တစ္ခါတေလ ကိုယ္တိုင္ေဝခြဲမရတဲ့အခါမ်ိဳးဆိုရင္ ဘာမွ tag မထားေသးသလို ဘာမွ tag မထားေသးေၾကာင္းကိုလဲ အသိေပးပါတယ္ ..
ဇာတ္လမ္းပံုစံက တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီး tag က် တစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာက် ကိုယ္လဲ ရွင္းမျပတတ္ဘူးပဲ .. ေသခ်ာတာကေတာ့ ကိုယ္ _ လို႔ tag ထားရင္ ဒီဇာတ္လမ္းက _ လို႔ ေတြးၿပီး ေရးထားတယ္ဆိုတာပါပဲ ..
အသည္းေတြကြဲေစဖို႔ တကယ္မရည္ရြယ္ပါဘူးဗ်ာ ..
ဒီေကာင္မေလးအတြက္ စိတ္စႏိုးစေနာင့္ျဖစ္ေစမိရင္ ကိုယ္က အမ်ားႀကီးအမ်ားႀကီး အားနာေတာင္းပန္ပါတယ္ .. ♡
ဘာလို့ပျောက်နာလဲ ကိုယ်မျှော်နာကို.. msger မှာလည်းမရှိ၊ ဝပမှာလည်းပေါ်မလာပါလားကွယ်
ဝပမှာ အခုပေါ်လာပါပြီကွာ ..
ပျောက်နေတာက ဒီအတိုင်း စိတ်ပင်ပန်းစရာလေးတွေရှိလို့ .. ဝူးဝူး .. 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ
@hensel_17 ဘယ်အချိန်တွေကို ထပ်ပြီးခိုးယူမိမှာအားနာတာလဲ လူဇိုးးဟန်းဆယ်(ノ｀Д´)ノ彡┻━┻ တွားးး ချိတ်ကောက်ဒယ်
ညနက်ထိ လိုင်းသုံးနေပြန်ပြီကွယ် .. အဆိုးလေးက သိပ်ဆိုးတာပဲ ..
ကိုယ် အများကြီးအများကြီး စိတ်မပျော်စရာလေးတွေရှိနေလို့ ဖဘမရောက်ဘဲ ဒီလာသောင်တင်နေတာ .. စာတွေတမင်မပြန်တာ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ .. အဆိုးနဲ့ဆို အဲ့ကိစ္စတွေပါ ဖီလာဖာလာပြောမိပြီး အဆိုးရဲ့အချိန်တွေ ထပ်ပြီးခိုးယူမိမှာ ကိုယ်က အားနာလို့ပါ ..
ချိတ်မကောက်ပါနဲ့ .. (ﾉ⑉˘3˘⑉)ﾉ♡
W³ ကိုဖတ်ပြီး အတွေးတစ်ခုဝင်တယ်သိလား
Parallel world က ကျန့်ကောနဲ့ပဲ အဆုံးမှာ ညားစေချင်နာಥ‿ಥ
ဖုန်းနံပါတ် မရှိဘူးရော ..
ကိုယ့် kpay ph နဲ့ပဲဖွင့်ထားတာ တယ်လီဂွမ်က .. အဲ့နံပါတ်နဲ့ လာခဲ့လိုက်ဏော် .. ဆက်ဆက် စောင့်နေပါ့မယ် .. ><
အိုခီ .. ခီခီ ..
ပြီးရင် ညန်ညန်ပြန်အိပ် .. (●´⌓`●)
ဘိုင်သယ်ဝေး ကိုယ်မက်ဆင်ဂျာ မသုံးတော့ဘူးရယ် တယ်လီဂွမ်လေးလာပေးပါဦး
ပျောက်နေတာ ကြာပြီညော်( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
၆ ရက် ကွက်စတိထဲပါဟာ ..
နောင်းမကေလို့ .. ဝူးဝူး
နယူးဖော်လိုဝါလေးပါᕙ(  • ‿ •  )ᕗ
ဟိုင်း .. အာညော် ..
Indispensable လေး အပ်ပါဦးလို့( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
@kimnamjoonlovesme အဲ့ဒါ g board ကြောင့်ပါಥ‿ಥ
ဖစ်နိမ်းက ကြည့်မှတ်ခဲ့ပြီးမှ ပြန်ရေးတာဟုတ် .. ခုမှ သေချာပြန်ကြည့်မိပြီး ပြန်ရယ်ချင်လာလို့ .. (人 •͈ᴗ•͈)
LTA ပြီးရင် လာပါမယ်လို့ .. (人 •͈ᴗ•͈)
ညကဟန်းဆယ်လိုင်းတက်လာမယ့် အချိန်ကိုစောင့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်ಠ︵ಠ
ဟန်းဆယ် စိတ်ဖောက်နေပြန်ပြီ ..
ညီမလေးက နောက်ကို စောစောအိပ် .. <3
Beauty and the beast က တကယ္ ျပန္မတင္ေတာ့ဘူးလားဟင္
@joonmyeon1234 ဟိုတေလာက အလုပ္႐ႈပ္ေနလို႔ အလုပ္ၿပီးရင္ ဖတ္မယ္ဆိုၿပီး ေတးထားတာ!ဝင္းနဲတြားၿပီ။အဆင္ေျပမွ ျပန္တင္ပါေနာ္!
ကိုယ္တိုင္လဲ မသိတာမို႔ အားနာလိုက္တာ ..